စတေီတဈဆူတညျပွီးတော့ ဘုရားကိုးကှယျမယျဆိုလို့ရှိရငျ မွတျစှာဘုရားကိုအာရုံပွုလို့ ဗုဒ်ဓပူဇာတော့ဖွဈပါတယျ။ ကြောငျးတဈကြောငျးဆောကျပွီးတော့ လှူလိုကျတာလောကျ ဒီသာသနာတျောအတှကျ အကြိုးဖွဈထှနျးမှုရှိမရှိ စဉျးစားပွီး တော့ကွညျ့ကွရအောငျ.
စတေီလှူတယျ ဟုတျပွီ။ လမျးသှားလမျးလာပုဂ်ဂိုလျတှေ ဘုရားကိုရှိခိုးမယျ လကျအုပျခြီကွတယျ ကုသိုလျရကွမယျ မှနျတယျ ဒီလောကျပဲ။ စတေီတညျတဲ့ပုဂ်ဂိုလျဟာလညျး ဘုရားကိုအာရုံပွုပွီးတော့ ကုသိုလျတှရေမယျ ဟုတျတယျ အဲလောကျပဲရမယျ..
ကြောငျးတဈဆောငျဆောကျလှူလို့ရှိရငျ ဘုရားကိုပူဇျောပွီးသားလညျးဖွဈမယျ၊ တရားကိုပူဇျောပွီးသားလညျးဖွဈမယျ၊ သံဃာကိုပူဇျောပွီးသားလညျးဖွဈမယျ။ ရတနာသုံးပါးလုံး ပူဇျောပွီး ဖွဈရုံမြှမက သာသနာတျော အဓှနျ့ရှညျကွာဖို့ မိမိပွုလုပျ လိုကျတဲ့ ကုသိုလျဟာ တဈထောငျ့တဈနရောကနပွေီးတော့ အကြိုးပွုနတောဖွဈတယျ..
အငျမတနျမှ တနျဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလျလို့ စိတျထဲမှာဝမျးသာနရေမယျ..”ဘုရားထကျမွတျတယျ”လို့ ပွောတာမဟုတျဘူးနျော စဉျးစားပွီးတော့ကွညျ့ အကြိုးဖွဈတာကိုပွောတာနျော..မွတျစှာဘုရားက စတေီတညျပွီးတော့ ကိုးကှယျတာကို ကုသိုလျ မရဘူးလို့ ပွောတာမဟုတျဘူး ရတယျ။ ဘုရားကိုပူဇျောတာ မကောငျးဘူးပွောတာ မဟုတျဘူး ကောငျးတယျ။ အကြိုးကို တှကျကွညျ့လိုကျ
ကြောငျးဆောကျလိုကျရငျ ဘုရားပါတယျ အဲဒီထဲမှာနျော ဘုရားရုပျပှားတျောထညျ့သှငျးပူဇျောထားတယျ၊ ဗုဒ်ဓပူဇာ၊ သံဃာတှသေီတငျးသုံးနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ ထိုသံဃာတှသေငျကွားနတေဲ့တရား ဓမ်မပူဇာ၊ သံဃာတှကေိုပူဇျောခွငျးဆိုတဲ့ သံဃာ့ပူဇာ၊ စတေီကိုတညျထားကိုးကှယျမယျဆိုရငျ ဗုဒ်ဓပူဇာတဈခုပဲရနိုငျတယျ။ ဓမ်မပူဇာမရနိုငျဘူး သံဃာ့ပူဇာမရနိုငျဘူး။
ဘာပွုလို့တုနျးဆို စတေိယ_စတေီက အာရုံပွုလို့ရတာတဈခုပဲရှိတယျ။ အခုလို စာပကေမျြးဂနျတှအေကွောငျးပွုပွီးတော့ သံဃာတှေ သီတငျးသုံးလို့ရတာမဟုတျဘူး။ အဲဒါကွောငျ့မို့ ကြောငျးဆောကျပွီးတော့ လှူရတာဟာ သာသနာတျော အတှကျ အငျမတနျမှအကြိုးဖွဈတယျ ဒီလိုမှတျရမယျနျော..
မွတျစှာဘုရားကိုယျတိုငျကိုက ဝလောမသုတ်တနျမှာ သံဃာကိုကြောငျးဆောကျလှူဒါနျးတာဟာ ပိုကောငျးတယျ။ ဆှမျး သင်ျကနျး ကြောငျး ဆေး ဆိုတဲ့အလှူဟာ ပိုကောငျးတယျတဲ့နျော။ ဘာပွုလို့လဲဆိုရငျ အခုပွောတဲ့အတိုငျးပဲ ကြောငျးဆောကျ လိုကျသဖွငျ့ ဗုဒ်ဓပူဇာဖွဈတယျ။ တရားဓမ်မတှေ သငျယူပို့ခနြသေညျ့ အတှကျကွောငျ့ ဓမ်မပူဇာလညျးဖွဈတယျ။ သံဃာတှေ သီတငျးသုံးနသေညျ့အတှကျကွောငျ့ သံဃာ့ပူဇာလညျးဖွဈတယျ။
ဒါတငျလားလို့ဆိုတော့ မကဘူး။ သံဃာတှကေ အဲဒီကြောငျးမှာ သီတငျးသုံးပွီးတော့ (Generation to Generation) မြိုးဆကျသဈတှကေိုလကျဆငျ့ကမျးပွီးတော့ ဘုရားရဲ့တရားတျောတှကေို သငျကွားပို့ခပြေးလိုကျလို့ နောကျတဈဆကျက ထပျပွီးတော့ သငျကွားပို့ခပြေးမယျဆိုရငျ မွတျစှာဘုရားရဲ့တရားတျောတှကေို လကျဆငျ့ကမျးပွီးသငျယူသှားတာပဲ..
ရှေးတုနျးကလညျး ဒီစနဈနဲ့သငျယူလာလို့ ခု နှဈပေါငျး (၂၆၀၀)ထိအောငျ တရားတှမေပြောကျမပကျြတာ..အကယျ၍ မသငျပဲနမေယျဆိုလို့ရှိရငျ ပြောကျသှားတာကွာလှပွီ ဘယျသူမှအဓိပ်ပါယျမဖျောနိုငျတော့ဘူး အဲတော့ သာသနာရှညျကွာဖို့ အတှကျ တို့လုပျထားတဲ့အလုပျဟာ အငျမတနျမှအကြိုးဖွဈတယျလို့ မှတျရမယျ..
စေတီတစ်ဆူတည်ပြီးတော့ ဘုရားကိုးကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရားကိုအာရုံပြုလို့ ဗုဒ္ဓပူဇာတော့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့ လှူလိုက်တာလောက် ဒီသာသနာတော်အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမရှိ စဉ်းစားပြီး တော့ကြည့်ကြရအောင်.
စေတီလှူတယ် ဟုတ်ပြီ။ လမ်းသွားလမ်းလာပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘုရားကိုရှိခိုးမယ် လက်အုပ်ချီကြတယ် ကုသိုလ်ရကြမယ် မှန်တယ် ဒီလောက်ပဲ။ စေတီတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်း ဘုရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့ ကုသိုလ်တွေရမယ် ဟုတ်တယ် အဲလောက်ပဲရမယ်..
ကျောင်းတစ်ဆောင်ဆောက်လှူလို့ရှိရင် ဘုရားကိုပူဇော်ပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်၊ တရားကိုပူဇော်ပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်၊ သံဃာကိုပူဇော်ပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်။ ရတနာသုံးပါးလုံး ပူဇော်ပြီး ဖြစ်ရုံမျှမက သာသနာတော် အဓွန့်ရှည်ကြာဖို့ မိမိပြုလုပ် လိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ဟာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေပြီးတော့ အကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်..
အင်မတန်မှ တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်လို့ စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာနေရမယ်..”ဘုရားထက်မြတ်တယ်”လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့် အကျိုးဖြစ်တာကိုပြောတာနော်..မြတ်စွာဘုရားက စေတီတည်ပြီးတော့ ကိုးကွယ်တာကို ကုသိုလ် မရဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး ရတယ်။ ဘုရားကိုပူဇော်တာ မကောင်းဘူးပြောတာ မဟုတ်ဘူး ကောင်းတယ်။ အကျိုးကို တွက်ကြည့်လိုက်
ကျောင်းဆောက်လိုက်ရင် ဘုရားပါတယ် အဲဒီထဲမှာနော် ဘုရားရုပ်ပွားတော်ထည့်သွင်းပူဇော်ထားတယ်၊ ဗုဒ္ဓပူဇာ၊ သံဃာတွေသီတင်းသုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ထိုသံဃာတွေသင်ကြားနေတဲ့တရား ဓမ္မပူဇာ၊ သံဃာတွေကိုပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ သံဃာ့ပူဇာ၊ စေတီကိုတည်ထားကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓပူဇာတစ်ခုပဲရနိုင်တယ်။ ဓမ္မပူဇာမရနိုင်ဘူး သံဃာ့ပူဇာမရနိုင်ဘူး။
ဘာပြုလို့တုန်းဆို စေတိယ_စေတီက အာရုံပြုလို့ရတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ အခုလို စာပေကျမ်းဂန်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ သံဃာတွေ သီတင်းသုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့ ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့ လှူရတာဟာ သာသနာတော် အတွက် အင်မတန်မှအကျိုးဖြစ်တယ် ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်..
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုက ဝေလာမသုတ္တန်မှာ သံဃာကိုကျောင်းဆောက်လှူဒါန်းတာဟာ ပိုကောင်းတယ်။ ဆွမ်း သင်္ကန်း ကျောင်း ဆေး ဆိုတဲ့အလှူဟာ ပိုကောင်းတယ်တဲ့နော်။ ဘာပြုလို့လဲဆိုရင် အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ကျောင်းဆောက် လိုက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓပူဇာဖြစ်တယ်။ တရားဓမ္မတွေ သင်ယူပို့ချနေသည့် အတွက်ကြောင့် ဓမ္မပူဇာလည်းဖြစ်တယ်။ သံဃာတွေ သီတင်းသုံးနေသည့်အတွက်ကြောင့် သံဃာ့ပူဇာလည်းဖြစ်တယ်။
ဒါတင်လားလို့ဆိုတော့ မကဘူး။ သံဃာတွေက အဲဒီကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးပြီးတော့ (Generation to Generation) မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို သင်ကြားပို့ချပေးလိုက်လို့ နောက်တစ်ဆက်က ထပ်ပြီးတော့ သင်ကြားပို့ချပေးမယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီးသင်ယူသွားတာပဲ..
ရှေးတုန်းကလည်း ဒီစနစ်နဲ့သင်ယူလာလို့ ခု နှစ်ပေါင်း (၂၆၀၀)ထိအောင် တရားတွေမပျောက်မပျက်တာ..အကယ်၍ မသင်ပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပျောက်သွားတာကြာလှပြီ ဘယ်သူမှအဓိပ္ပါယ်မဖော်နိုင်တော့ဘူး အဲတော့ သာသနာရှည်ကြာဖို့ အတွက် တို့လုပ်ထားတဲ့အလုပ်ဟာ အင်မတန်မှအကျိုးဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ရမယ်..